Ephreli 30, 2009 by okunikezwayo Shiya amazwana
okufushane Izikhathi edlule siye ezikhishwe 0.1.4 endle. Nakuba lokhu nje ukukhululwa ezincane, okuyinto awushintshanga ukuphela interface yomsebenzisi. Lots of wenziwa phezu angaphambili futhi abahumushi ekuthuthukiseni isipiliyoni. Cishe wonke amafayela umthombo kwashintshwa ngalesi ukukhululwa futhi sethemba akukho izimbungulu ngokunyenya.
izici Okuphawulekayo ngale ncwadi zihlanganisa:
Ukusekela amehlo candy ka ibha yokuqhubeka njengoba bukhoma ngokuzenzakalela translation kwenzeka
Umlando izinguquko manje kubonakala ngabahumushi
Ikhodi ukuthi ubuhle kanye okukhipha (kwimodi translation) usunciphe ngamaphesenti cishe 60%
Sithemba uyophila lokhu eyodwa!
Ephreli 2, 2009 by okunikezwayo 5 Amazwana
Ngithanda ukubonga Amit futhi Julian for their help debugging this tricky issue.
March 31, 2009 by okunikezwayo 3 Amazwana
March 1, 2009 by okunikezwayo Shiya amazwana
Siye ezikhishwe version 0.0.2 kuya WordPress plugin lwemibhalo. Lokhu kukhululwa amakheli bug emaphaketheni okudale nenkinga nge ekufakweni okusha.
Siphinde wanezela isici okuvumela umbhalo kwisi kweso avele kusayithi ngaphandle kokudinga Ukulayisha kabusha ikhasi.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: ukukhululwa, plugin wordpress
« Ikhasi langaphambilini